ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसको जित, चिरिबाबु बने मेयर. – Sabaikoaawaj.com
ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसको जित, चिरिबाबु बने मेयर.
बुधबार, जेष्ठ १०, २०७४ 7:14:54 AM	मा प्रकाशित
काठमाडौं,१० जेठ/ ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा गीता सत्याल विजयी भएका हुन् । महर्जनले एमालेका हरिकृष्ण व्यन्जनकारलाई ३२६ मत अन्तरले पराजित गर्दै मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
मेयर निर्वाचित कांग्रेसका महर्जनले २४ हजार ६ सय ४२ मत पाएका छन् । एमालेका ब्यन्जनकारको पक्षमा २४ हजार ३ सय १६ मत परेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेका माओवादी केन्द्रका दिनेश महर्जन ‘दिपेश’ले १० हजार ६६१ मत पाए ।
यसैगरी उपमेयरमा कांग्रेसकी गीता सत्यालले साझा पार्टीकी शोभा शाक्यलाई ५ हजार ५७९ मत अन्तरले हराइन् । उपमेयर निर्वाचित गीता सत्यालको पक्षमा १९ हजार ८१९ मत परेको छ भने साझा पार्टीकी शोभा शाक्यले १४ हजार २४० मत पाएकी छन् । एमालेसँगको गठबन्धनबाट उमपेयरको उम्मेदवार बनेका राप्रपाका बाबुकाजी थापाले १०५४७ मत प्राप्त गरे । ललितपुर महानगरपालिका जितेसँगै कांग्रेस विजयी भएका स्थानीय तहको संख्या १०४ पुगेको छ ।
ललितर जिल्लामा पहिलो पार्टी बन्यो कांग्रेस
ललितपुरका ६ स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले ३, एमालेले २ र माओवादी केन्द्रले एउटामा जित हासिल गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुखमा गीता सत्याल, गोदावरी नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसका गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुखमा मुना अधिकारी तथा वागमती गाउँपालिका अध्यक्षमा बीरबहादुर लामा र उपाध्यक्षमा रन्जना घिमिरे निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी एमालेले महालक्ष्मी नगरपालिका र महांकाल गाउँपालिका जितेको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रमुखमा रामेश्वर श्रेष्ठ र उपप्रमुखमा निर्मला थापा तथा महांकाल गाउँपालिका अध्यक्षमा रामचन्द्र दाहाल र उपाध्यक्षमा कमला तामाङ विजयी भएका छन् । माओवादी केन्द्रले जितेको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गोपिलाल सिङ्तान र उपाध्यक्षमा मिङ्मा लामा छन् । पहिलो चरणको चुनावको हालसम्मको परिणाममा भने नेकपा एमाले ११९ स्थान जित्दै पहिलो पार्टी बनेको छ । तेस्रो स्थानको माओवादी केन्द्रले ४६ स्थान जितेको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १०, २०७४ 7:14:54 AM